AIOps Platform | Ngwọta AIops maka nleba anya netwọkụ ozugbo
Jiri nwayọọ tinye IT Ops
Jiri usoro mmụta miri emi malite njem AIOps gị maka ọrụ IT
Jiri malite njem AIOps gị
Usoro mmụta miri emi maka ọrụ IT (DFITTM)
Tụgharịa data gị ka ọ bụrụ nghọta dị ike nke nwere ike ime site na iji AI/ML na akpaaka nwere ọgụgụ isi. Mebie mkpọtụ ahụ site n'iwepụta data dị mkpa gafere puku kwuru puku ihe data wee wulite ọnọdụ ya site na mmekọ dị egwu.
Otu Platform, Nleba anya zuru oke
Mepụta mgbagwoju anya nke akụrụngwa IT ọgbara ọhụrụ nke gburugburu ngwakọ na gburugburu igwe ojii wetara site na ọrụ IT akpaaka.
Onye nnọchi anya (metric, log, ngwugwu)
Otu onye na-ahụ maka nchọpụta akpaaka na ịnakọta metrik, ndekọ na data ngwugwu sitere na mkpokọta IT niile.
Topology maapụ iji hụ anya dabere n'etiti akụrụngwa yana ọrụ igwe ojii wee hụ na mmekọrịta na-agbanwe agbanwe.
Mmekọrịta AI na-akpata
Nweta nghọta site na puku kwuru puku data, site na netwọkụ niile site na ọrụ igwe ojii na ngwa, iji wuo ọnọdụ ka mma. Mepụta ihe dị mkpa na ihe na-adaba na amụma site n'ịchọpụta anomaly.
Mmụba na-enweghị atụ
Nyochaa nleba anya n'ofe mkpokọta gị wee wulite echiche dị n'otu maka nhụta zuru oke nke infra ngwakọ gị.
Megharịa ITOps gị maka ịchọpụta ihe adịghị mma, mkpokọta ọkwa ọgụgụ isi, nhazi ndabere, yana njikọta na sistemụ mpụga.
Ikpo okwu AIOps zuru oke
Jikọọ ụzọ gị n'ihu na azụ azụ iji ghọta mmetụta mgbanwe nkà na ụzụ na azụmahịa gị; jikwaa ngwa ndụ okirikiri na atụmanya ndị ọrụ njedebe na ntinye dị mfe.
Welie ahụmịhe onye ọrụ njedebe
Nleba anya n'ofe akụrụngwa gị iji nweta nghọta nke ahụmịhe onye ọrụ n'ime ọwa niile.
Nyekwa SRE ike
Nweta data site n'ọtụtụ ebe data, hichaa mkpọtụ ahụ, kpughee ntụpọ kpuru ìsì na-egosi adịghị mma, wulite otu ọnọdụ ma nyekwa SRE gị ike.
Nchịkọta ndekọ oge na-eme ka nchọpụta nsogbu nke mperi dị n'akụkụ ihe nkesa dị mfe, okwu netwọkụ, nchọta ngwa, na ịchọpụta ihe mgbochi.
Megharịa usoro ọgbọ tiketi na mmụba site na ijikọ obodo na ServiceOps na nyiwe tiketi ndị ọzọ.
Hazie ọrụ IT gị site na iji okirikiri
Kwado akụrụngwa IT gị ka ọ bụrụ ihe a na-ahụ anya n'ogo site na iji AI na-agbanwe agbanwe nke na-achọghị ọzụzụ ma ọ bụ mmụta yana wulite ọnọdụ ka mma maka MTTR emelitere.
Chọpụta data na-adabaghị n'ụkpụrụ a tụrụ anya na nke a na-emebu. Mepụta ihe dị mkpa wee dapụ na ụkpụrụ site na nchọpụta Anomaly.
Nlebanya kwadoro site na nyocha
Nweta ihe nleba anya dị elu na dashboarding na nlebanya ike na nchọpụta nsogbu maka NOC, nchekwa na otu IT.
Ghọta mgbanwe Topology
Choputa, tugharia, ma kwuputa usoro bara uru site na data na mmekorita akọwaputara n'etiti mmemme.
AI ops modul
Nweta atụmatụ siri ike na akụrụngwa dị elu yana ngwakọta AI/ML algọridim iji kwalite azụmahịa gị wee zute ihe ịma aka na-ebilite.
Ihe nleba anya netwọkụ
Nghọta netwọkụ AI-chụpụrụ maka okporo ụzọ netwọkụ, arụmọrụ na nchekwa.
Nweta nlele zuru oke n'ofe gburugburu. Ọ bụrụ igwe ojii, n'ime ụlọ, ma ọ bụ ngwakọ.
Nghọta oge na nyocha usoro n'ime nde data log na ọsọ ọkụ.
Onye na-eme ihe Ngwá ọrụ nyocha nke netwọkụ
45% Mbelata na MTTD na MTTR
Site na iji sistemu njikere na-arụ ọrụ yana netwọk nwere ọgụgụ isi, wedata oge nkwụsịtụ na oge mgbake iji dozie nsogbu ahụ.
38% Ịchekwa ọnụ ahịa tụnyere ngwá ọrụ sieded
Nweta nleba anya oge niile ka ị mara maka njehie nhazi yana mgbanwe na metrik isi, na-echekwa ọnụ ahịa ma e jiri ya tụnyere ngwaọrụ sieded.
25% Mmụba na arụmọrụ arụmọrụ
Dozie nsogbu ndị nwere ike ime ngwa ngwa karịa mgbe ọ bụla wee welie arụmọrụ arụmọrụ n'ozuzu ya site n'ilekwasị anya na ihe kacha mkpa.
Njikọ Enweghị Ndozi na ọkacha mmasị gị
inyocha AI ops
Onye ọrụ nwere enyi, dị mfe ịtọlite, ma nwee ihe niile ịchọrọ maka nlekota akụrụngwa IT enweghị nkebi.
Ọrụ NMS jikọtara ọnụ nke Motadata na-enye azịza AI na-akwalite nke ukwuu maka Nkwenye Ọrụ, Orchestration & Automation, na-enyere ụlọ ọrụ aka iru ebumnuche njikwa netwọkụ ha. Motadata ga-enyekwa gị nlele netwọkụ site na iji ngwa zuru oke yana echiche akụrụngwa ka ị nwee ike ịchọta ma dozie okwu ngwa ngwa.
Hụ ka ndị otu azụmaahịa dị iche iche si enweta Motadata iji kwalite nrụpụta yana hazie usoro dị n'ime iji nweta ebumnuche nhazi buru ibu.
Hụ ka Motadata nwere ike isi nyere aka dozie ihe ịma aka maka ikpe dị iche iche na ebumnuche iwelie oge na ịkwalite arụmọrụ na AI/ML na akpaaka.
Hụ ka ụlọ ọrụ dị ka nke gị si eji AIOps maka nghọta na-arụ ọrụ
Kedu ihe bụ AIOps?
AIOps bụ ngwa emere maka ọrụ IT na-anya AI. Mgbakwunye AI na ML na-eme ka omume nke nlekota na ijikwa gburugburu ngwakọ/ike dị elu ghara isi ike. Site na nyocha algọridim n'elu ụgbọ mmiri, AIOps na-arụ ọrụ na IT Ops na ndị otu DevOps iji nweta ọrụ dijitalụ ka mma ma dozie nsogbu ngwa ngwa tupu emetụta uto azụmahịa ma ọ bụ afọ ojuju ndị ahịa.
Kedu uru ngwaọrụ AIops dị?
Site na arụmọrụ IT AI-Driven, ngwaọrụ AIops na-atụgharị karịa na ọgbọ ọzọ. Mmekọrịta data ozugbo na-enye nghọta dị mma, yana njikọta AI na ML na-arụ usoro dakọtara, ịkọ amụma, na nchọpụta ihe adịghị mma. Àgwà ọma na akpaaka dị elu nwere ike iweta ọganihu na nzukọ ọ bụla, na-eme ka ndị otu na-arụ ọrụ na-ahụ na oge ọrụ dị oke mkpa na-enye ahụmahụ ọrụ na-enweghị nsogbu.
Kedu ihe bụ isi ihe dị na AIOps Platform?
AIops bụ ikpo okwu iji rụọ ọrụ IT ngwa ngwa na amamihe. Asụsụ okike na-anakọta data sitere na isi mmalite ọ bụla wee buru amụma nghọta siri ike. Ọrụ ndị na-arụ ọrụ na AI na ML mbanye anomaly nchọpụta na mmezi akpaaka. Site na nleba anya nke oge na mgbe niile, ịnọgide na-enwe omume ahụike yana idozi ihe mgbochi na-adị mfe.